DF oo Askar ku toogatey Muqdisho
16 Jan 16, 2013 - 6:24:01 AM
Maxkamada Ciidamada DF ayaa maanta 16 January,2012 dil ku fulisay 2 Askari oo ka tirsan ciidamada DF kuwaasoo horay loogu helay laba dambi oo kala ahaa Dil iyo Kufsi, waxaana xukunkooda uu maanta ka dhacay Iskoolka Booliiska oo ay ku taalo goobta dadka lagu toogto.
Gudoomiyaha Maxkamada Ciidamada DF Liibaan Yaroow oo markii uu dhacay xukunka la hadlay Saxaafada ayaa sheegay in labadan askari ay ka hor-qirteen Maxkamada dambiyada lagu soo eedeeyay sidaasna lagu dilay.
Toogashadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Saraakiisha Ciidamada DF oo uu ku jiray Taliyaha Ciidanka Booliiska Somalia, waxaana labada wiil ee la dilay lagu kala magacaabi jiray: Jamaal Axmed Cabdulqaadir oo Ciidamada Booliiska ka tirsanaa laguna eedeeyay dil.
Askariga kale ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Cismaan Magan oo ahaa Askari Milateri ah waxaana lagu helay inuu kufsaday Haweeney lagu magacaabo Nuuro Cadoow Cali.
“Dilka Askartan waxay cadeyn u tahay in Dowladu aysan ogolaan doonin in si khalad ah dadka loo dhibaateeyo” ayuu yiri Liibaan Yarow oo sheegay inay uga digayaan Askarta kale ee Dowlada inay dambiyo noocan oo kale ah ku dhacaan.
Gudoomiyaha Maxkamadu wuxuu sheegay in Askarigii lagu helo falalkan oo kale inuu muteysan doono dil toogasho, iyadoo ay noqonayso markii ugu horeysay oo Askari kufsi lagu soo eedeeyay lagu fuliyo xukun dil ah.
Saraakiisha Dowlada ayaa sheegay inay jiraan askar kale oo dilal ku xukuman laguna fulin doono maalmaha soo socda, iyadoo tani aysan ahayn markii ugu horeysay oo Askari lagu xukumay dil lagu fuliyo xukunkaas.